"Aza mampahory ny mpitondratena sy ny kamboty akory ianareo… Raha maka ny lamban’ny namanao ho tsatòka ianao, dia hampodinao aminy izany, raha mbola tsy milentika ny masoandro. Fa izany ihany no firakofany sady fitafiany amin’ny hodiny, ka inona no hoentiny mandry?"Eksodosy 22:21,25,26
Ny andinin-tSoratra Masina voalaza eo ambony dia anisan’ireo fitsipika nomen’Andriamanitra an’i Mosesy, ampiarahana amin’ny Lalàna. Ireo fitsipika ireo dia misy antsipiriany maneho ny hamoram-pon’Andriamanitra amin’ny osa sy ny mahantra.
Izay fitafiana natao ho antoka dia tsy maintsy naverina tamin’ny tompony alohan’ny maty masoandro, mba tsy hangatsiaka izy: “Fa izany ihany no firakofany sady fitafiany amin’ny hodiny, ka inona no hoentiny mandry?” Andriamanitra dia mitsinjo ny hiadanan’ny mahantra ao amin’ny torimasony… Tiany ho afa-miala sasatra ny omby sy ny boriky, tiany hanana andro fitsaharana ny mpanompo (Eksodosy 23:12). Tsy tokony nojinjaina tanteraka ny vokatra teny an-tanimbary, mba hahazoan’ny mahantra mitsimpona ny ambinambiny (Levitikosy 19:9-10).
Ny Testamenta Taloha (fizarana voalohany ao amin’ny Baiboly) dia feno fitsipika miahy ny mahantra, ny vahiny, ny mpitondratena na ny kamboty. Tsy sitrak’Andriamanitra raha tsy manana izay ilainy ireo tsy mba misy olona ianteherana. Milaza ny tenany ho “Rain’ny kamboty sy Mpanome rariny ny mpitondratena” Izy (Salamo 68:5). Nefa mbola tamin’ny ampahany ihany no nanehoan’Andriamanitra ny tenany, tamin’izany fotoana izany.
Jesosy, ao amin’ny Testamenta Vaovao, no nanambara manontolo an’Andriamanitra (jereo Jaona 1:18). Ny fihetsiny rehetra dia tsy nanao afa-tsy nanoritra ny fitiavan’Andriamanitra miahy ny mahantra, ny tsy manana, ary ny fitsinjovany izay ilain’ny vatana sy fanahin’ny olona rehetra. Hatrany am-boalohany i Satana dia efa nitady hamafy fisalasalana sy tsy fitokisana ao am-pon’ny olona, momba Ilay Mpahary azy. Te handresy lahatra antsika izy fa Andriamanitra dia mafy fo! Saingy iza moa, rehefa mamaky ny tantaram-piainan’i Jesosy, no afaka hihevitra fa tsy miraharaha ny fahoriantsika Andriamanitra?